योग, ध्यान आफैमा राम्रो विषय हो । एकाग्र चित्त लगाउँदा चिताएको विषयमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यका लागि पनि ध्यान, योग जरुरी छ । तर, राजनीतिक नेताहरुको ध्यान, योगको उद्देश्य देश हुनुपर्छ, देसवासी हुनुपर्छ । केही गरौं भन्ने इच्छाशक्तिबाट प्रेरित हुनुपर्छ । के देउवा दम्पत्तिको यो ध्यानको केन्द्रमा राष्ट्र र राष्ट्रवासी छन् कि भर्खर प्राप्त सत्ताको सुखानुभूति ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री बने । संसदले उनलाई प्रचण्ड बहुमत दिएको हो । यो स्थितिमा देशका प्रधानमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य भनेको देशवासीलाई धन्यवाद दिने र देशका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता हुनुपथ्र्यो । दौडेर श्री श्री १००० स्वामी गुरु कृष्णदासजी महाराजको चरणमा पो पुगे । गुरु आशीर्वाद दिने, देउवा दम्पत्ति एकचित्त लगाएर ध्यान गर्ने र गुरु आशीर्वाद थाप्ने । योभन्दा रमाइलो दृश्य लोकतन्त्रमा देख्न मुस्किलै छ ।
जनताको मत, विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति जनतामा जानु पहिले नै सन्तको शरणमा ? फेरि यिनै नेताहरु धर्मनिरपेक्षताका वकालत गरिरहेका छन् । ढोंग र ढोंगीचरित्रको पनि पराकाष्ठा भनेको यही हो । हिन्दुधर्म मान्ने, धर्ममा विश्वास पनि गर्ने, गुरुचरणमा पनि पर्ने, क्रिश्चियनको संरक्षण गर्ने । शिद्धबाबा महायोगी कृष्णदास महाराजजीले यस्तो ढोंगीलाई कस्तो आशीर्वाद दिए होलान् ?
भनिन्छ, यिनै गुरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसैले गुरुकै सल्लाहअनुसार शपथ लिए, बालुवाटार सरिसकेका छैनन् । गुरुले भनेको दिनमात्र देउवा बालुवाटार सरकारी निवासमा सर्ने अरे ।
भारतमा इन्दिरा गान्धी रुखमा चढेर शिद्ध भएका लक्कडबाबाको दर्शन गर्न हप्तैपिच्छे जान्थिन् रे । संसारकै ठूलो लोकतन्त्रमा त्यस्तो उदाहरण, नेपालमा त नयाँ नयाँ लोकतन्त्र, नेताहरुले तमासा त देखाउने नै भए । हेर्दै जानुपर्छ, १२ वर्षमा १० सरकार देखियो, देउवा सरकारले अरु कस्तो कस्तो तमासा देखाउने हुन् ।